Monday May 21, 2018 - 07:18:35 in Wararka by Super Admin
Sirdoonka guud ee dowladda Turkiga ayaa sheegay in ay baarayaan wararka laysla dhaxmarayo ee sheegaya in sirdoonno caalami ah ay qorsheeyeen dilka Erdogaan.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in kooxo katirsan Mucaaradka Turkiga oo kaashanaya sirdoonka Yahuudda ay maleegeen qorshe lagu khaarijin lahaa Rajeb Erdogaan xilli uu ku sugnaa magaalada Sarajevo oo ah caasimadda wadanka Bosnia.
Jaaliyadda Turkiga ee wadanka Maqdooniya ayaa sirdoonka Turkiga gaarsiisay in lamaleegayo isku day dil oo ka dhan ah Erdogaan, war kasoo baxay sirdoonka Turkiga ayaa lagu sheegay in sirdoonno reergalbeedka ay soo gaarsiiyeen in kooxo Turki ah isku diyaariyeen fulinta isku day dil oo ka dhan ah madaxweynaha Turkiga.
illaa iyo hadda wardoonka dowladda Turkiga uma suurtagelin in ay xadidaan heybta iyo halka ay ku suganyihiin kooxaha dilka geysan rabay oo katirsan Jamaacada Fataxullaah Gooleyn sida uu faafiyay wargeyska Bin Shafiiq ee kasoo baxa magaalada Ankara.
Warbaahinta taageerta xisbiga talada haya ee Turkiga ayaa maamulka Yahuudda (Israa'iil) ku eedeeyay in uu gacan ka geystay qorshaha lagu dili lahaa Erdogaan.
Bartamihii sanaddii 2016 wadanka Turkiga waxaa ka dhacay inqilaab melleteri oo ladoonayay in lagu maja xaabiyo Erdogaan oo xilligaas ahaa R/wasaare balse isku daygaas ayaa si lamafilaan ah u fashilmay.
Kooxaha mucaaradka Turkiga oo ku guuleystay maamulidda magaalada Istanbuul.